सैन मिगुएल डे एस्कालदा, लेओनमा प्रि-रोमान्सिक गहना यात्रा समाचार
सान मिगुएल डे एस्क्लेडा
लुइस मार्टिनो | | संस्कृति, मार्गदर्शकहरू
सान मिगुएल डे एस्कलाडा मुख्य मध्ये एक हो प्रि-रोमेनेसक स्मारकहरू को प्रान्तबाट लियोन। यो मठ थियो जुन 913 १XNUMX मा भिक्षुहरू बस्ने ठाउँको लागि पवित्र थियो कोर्डोबा, तर हाल मात्र चर्च र केही अन्य निर्भरताहरू.
यो नगरपालिकामा अवस्थित छ ग्रेडफिज, लियोनको राजधानीबाट करीव सत्ताइस किलोमीटर र मा स्यान्टियागोको सडक। यो मठ पुरानो भिसिगोथ चर्चमा निर्माण गरिएको थियो, स्पष्ट रूपमा सान मिगेलको लागि समर्पित थियो। यदि तपाईं प्रि-रोमेनेस्कको यस गहनाको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई पढ्न जारी राख्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 सैन मिगुएल डे एस्केलादाको इतिहास
2 स्यान मिगुएल डे एस्काल्दाका विशेषताहरू
3 स्यान मिगुएल डे एस्केलाडाको कोडेक्स
4 स्यान मिगुएल डे एस्क्लदा कसरी पुग्ने
सैन मिगुएल डे एस्केलादाको इतिहास
सन्‌ 912 913 १२ मा एबोट अल्फोन्सोको नेतृत्वमा भिक्षुहरूको एउटा समूह लेनको यस ठाउँमा आइपुगे। त्यहाँ बस्न कटिबद्ध, तिनीहरूले केवल एक वर्षमा एक गुम्बा बनाए जुन पहिले नै XNUMX १XNUMX मा बिशपले अभिषेक गरे एस्टोर्गाको सेन्ट जेनेडियस.
यसको निर्माणको लागि, तिनीहरूले आदिम भिजीगोथिक निर्माणका सामग्रीहरूको फाइदा उठाए जुन हामीले कुरा गरिरहेका थियौं। यो अझै यसको पर्खाल मध्ये एकमा देखिन्छ, जहाँ तपाईं मूल मन्दिरबाट एक शिलालेख देख्न सक्नुहुन्छ। यसको अंशका लागि, मठ ११ औं शताब्दीमा सबैभन्दा भव्य अवधिमा बाँचिरहेको थियो, त्यस समयमा केही नयाँ निर्माण तत्त्वहरू थपिएको थियो।
XIX मा पहिले नै XISX मा, कारणले गर्दा कन्फिसिजेसन भयो Mendizábal चर्चको सम्पत्ती, स्यान मिगुएल डे ला एस्केलाडा छोडिएको थियो। यद्यपि यसका धेरै पुन: भण्डार गरियो र, १ 1886। को रूपमा प्रारम्भिक रूपमा घोषणा गरियो राष्ट्रिय स्मारक.
स्यान मिगुएल डे ईस्काल्दाको पोर्टिको
स्यान मिगुएल डे एस्काल्दाका विशेषताहरू
हामीले भनेझैं, यो निर्माणले विशेषताहरूको प्रतिक्रिया दिन्छ पूर्व रोमान्सक कला। त्यो हो, तिनीहरूले प्रस्तुत कि उस्तै सान्ता मारिया डेल नारानको o सान मिगुएल डे Lillo ओभिडोमा। मोटो रूपमा बोल्दा, यसले भिजिगोथ तत्वहरूलाई अन्य मोजाराबिक तत्त्वहरूको साथ जोड्दछ।
यद्यपि वर्तमान विज्ञहरू यसलाई कल गर्न रुचाउँछन् कला फेरि। तपाईले अनुमान गर्न सक्नुको कारण यो हो कि यो इसाईहरूले निर्माण गरेका थिए जुन मुसलमानहरूले छोडेर आएका क्यास्टाइल देशहरूमा बसोबास गरिरहेका थिए। तर यी सीमा क्षेत्रहरूले सँधै सम्पर्कहरू ड्राइभ गरिरहेको हुनाले यस शैलीसँग पनि एक बलियो छ मोजाराबिक तत्वभनिएको छ, इसाईहरूको समान रूपमा तर त्यो अल-एल्डलसको स्वामित्वको क्षेत्रबाट आएको हो।
अर्कोतर्फ, हामीले पनि उल्लेख गरिसकेका छौं कि स्यान मिगुएल कम्प्लेक्सले यसको निर्माणपछि पनि थुप्रै विस्तार प्राप्त गर्‍यो। संरक्षित छन् कि ती मध्ये, महान रोमानेस्क टावर ११ औं शताब्दीदेखि जटिलको दक्षिणी भागमा प्रभुत्व जमाउँछ।
तर, आज निर्माण संरक्षित भागहरु मध्ये, चर्च सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व हो। छ बेसिलिकल प्लान्ट र यसलाई तीनवटा नभाहरुमा विभाजित गरिएको छ, जुन फलस्वरूप परम्पराको धनु द्वारा विभाजित हुन्छ घोडाहरु कमानाहरू मुस्लिम त्यस्तै, मन्दिरको टाउको र नाभीको बिचमा लम्ब ठाडो हुन्छ जुन कार्य गर्दछ transept र यो समारोहहरूमा पादरीहरूको लागि निर्धारित हुनेछ।
यसको अंशको लागि, हेडरसँग छ तीन apses जुन भित्री भागमा अर्धवृत्ताकार हुन्छ, तर बाहिरबाट आयताकार हुन्छ। थप रूपमा, यी द्वारा ढाकिएका छन् ग्यालन भोल्ट यस्तै प्रकार जुन तपाईं धेरै अरब मस्जिदहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ।
Transept र टाउको बीचमा एक छ आइकनोस्टेसिस क्रसको आकारमा स्तम्भहरू द्वारा गठन गरिएको थियो कि, हिस्पानिक मूर्तिमा, पाकालाई भेला गर्नका लागि विश्वासीहरूबाट लुकाइएको थियो। यो औपचारिक मान्यता थियो जुन एघारौं शताब्दीमा रोमनलाई अपनाई नआएसम्म प्रायद्वीपमा राखिएको थियो। आइकनोस्टेसिस आर्किटेक्चरल तत्व थियो जसले त्यो गोपनीयता प्रदान गर्‍यो। सामान्यतया, यो पर्दा धार्मिक आकृति संग सजाइएको कि वेदीको अगाडि राखिएको थियो। यो ब्याजान्टिन मन्दिरहरूमा प्रयोग गर्न सुरु भयो, जहाँबाट यो पश्चिमतिर सर्‍यो।
सैन मिगुएल डे एस्कालदाको घोडाको कमानीको विवरण
बाहरीका लागि, मन्दिरमा उन्नत पोर्टेकोको अभाव छ, जुन कुरा अस्तित्व पूर्व-रोमेनेस्कमा सामान्य छ। प्रवेशद्वारहरू पार्श्व र यसको पश्चिमी भागमा छन्। ठीक, चर्चको दक्षिण तिर एक छ अश्वशक्ति मेहराबको साथ आर्केड ग्यालरी त्यो सम्पूर्ण सुन्दर बनाउँछ। यो रचनात्मक तत्त्व, केही समय पछि यो १० औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो, यो पनि अस्थिरियन मन्दिरहरूको विशिष्ट हो र पछि व्यापक रूपमा प्रयोग हुने थियो रोमान्सक वास्तुकला.
चर्चको प्रकाशको बारेमा, यसले अन्य प्रारम्भिक इसाई मन्दिरहरूको सुविधाहरू पछ्याउँदछ। त्यसकारण, यो मुख्य नाभ र एपीएस दुबैको उडान भित्तामा साना विन्डोजबाट प्राप्त गरिन्छ। अन्तमा, छत दुई चरणमा समर्थित छ र एक ठूलो ढलानको साथ ढलान छ।
यो अन्तिम रचनात्मक तत्त्व थियो जुन १० औं शताब्दीको सुरुमा सान मिगुएल डे एस्कालाडा जम्मा थपिएको थियो। यसमा बाक्लो ढुसीहरू छन् र मूलतः तीन फ्लोरहरू मिलेर बनेको छ। इन्टीरियर अर्धवृत्ताकार मेहराबको साथ ढोकाबाट पहुँच गरिन्छ जुन तपाईंलाई मा लैजान्छ सैन फ्रक्टुओसोको चैपल, Abbots को Pantheon पनि भनिन्छ।
तर यो मुख्यतया प्रकाश पार्छ डबल घोडा कमाना विन्डो। यसको उपस्थिति उत्सुक छ किनकि टावर रोमान्स्क छ। तसर्थ, यस प्रकारको धनु प्रयोग गरिएको थिएन। यदि यो गरियो भने, यो मन्दिरको पश्चिमी भागमा फेला परेको अनुकरण गर्नु थियो।
अन्तमा, सैन मिगुएल डे Escalada को अलंकार छ धेरै समयको लागि धेरै धनी छ। यसमा क्यापिटलहरू, फ्रीजहरू, ल्याटिसहरू र ढोका हुन्छन्। तिनीहरूको मनसायका लागि, तरकारीहरू प्रशस्त छन्। उदाहरण को लागी, गुच्छा, पात र खजूर रूखहरू। तर त्यहाँ अन्य ज्यामितीय आकारहरू पनि छन् जस्तै ब्रेडि or वा मेस र जनावरहरू, जस्तै चराहरूले नेभाराको बन्चमा ठेलिरहेका छन्।
स्यान मिगुएल डे एस्केलाडाको कोडेक्स
वर्ष 922 को आसपास, the एबट भिक्टर, लेनोनी मठमा जुन हामीलाई चिन्तित छ, एउटा कोडेक्सको सिर्जना गर्न आदेश दियो जुन "प्रकाशको पुस्तकमा टिप्पणी" प्रतिलिपि गर्ने बाट लाइबानाको बिटस। परिणाम तथाकथित थियो 'सान मिगुएल डे एस्केलाडाबाट धन्यबाद'मास्टर रोशनीको लागि जिम्मेवार मागियस। जे होस्, यो कोडेक्स स्पष्टतः लेओनी मठमा बनेको थिएन, तर सान साल्भाडोर डे टबारामा बनेको थियो जुन उही नामको जामोरा शहरमा अवस्थित थियो। हालमा, 'बीटो डे सान मिगुएल डे ईस्कालदा' लाई संरक्षित गरिएको छ मोर्गन पुस्तकालय न्यू योर्क बाट।
लियोन मन्दिरको पछाडि
स्यान मिगुएल डे एस्क्लदा कसरी पुग्ने
यो स्मारक अवस्थित छ, जस्तो कि हामीले तपाईंलाई भनियौं, लियोनियाको नगरपालिकामा ग्रेडफिज। स्मारकमा पुग्नको लागि एक मात्र मार्ग सडक हो। तपाईंसँग प्रान्तको राजधानीबाट बसहरू छन्, तर ती प्रायः बारम्बार हुँदैनन्। हाम्रो सल्लाह भनेको तपाई भित्र जानुहोस् तपाईंको आफ्नै कार.
बाट यो गर्न लियोन, तपाईंले लिनु पर्छ N-601 जसले शहरलाई भ्लालाडोलिडसँग जोड्दछ। Villarente को उचाई मा तपाइँ ले लिन छ LE-213 जसले तपाईंलाई ग्रेडफिसमा लैजान्छ। तर, नगरपालिका को राजधानी पुग्नु अघि, तपाईं एक लिनु पर्छ बाँया विचलन मठ घोषणा गर्दै।
अन्तमा, सान मिगुएल डे एस्क्लेडा यो सबै क्यास्टाइलमा एक पूर्व पूर्व रोमान्स्क भवन हो। उनको अस्तित्व समकालीनहरूमा सम्बन्धित, उनको सुन्दरताले तपाईंलाई उदासीन छोड्ने छैन। अगाडि बढ्नुहोस् र यसलाई हेर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » संस्कृति » सान मिगुएल डे एस्क्लेडा
पुनः कब्जा गरिएको भूमिमा बसोबास गर्ने कास्टिलियनहरू? क्यास्टेलियन भवन? न त यी देशहरू बसोबास गर्ने क्यासटेलियनहरू थिए न त यो क्यास्टेलियन भवन सर हो। यो लेन हो, लिस्टनको क्षेत्र क्यास्टिल्ला होइन। यदि तपाईं आफ्नो प्रकाशन सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने, लेनका मानिस धेरै आभारी हुनेछन्। हामी निरन्तर संज्ञाले धेरै थकित छौं, यो राम्रो छ।
Pilar लाई जवाफ दिनुहोस्
जब सान मिगुएल डे एस्क्लाडा बनाइएको थियो, कास्टिल्ला लेनको राज्यको काउन्टी थियो, त्यसैले अण्डलुलिस भिक्षुहरू उनीहरू बसोबास गर्ने लóनमा थिए। आज यो भवन लियोन क्षेत्रमा अवस्थित छ, क्यास्टिल्ला वा लियोन, जसको नामले संकेत गर्दछ, दुई क्षेत्रहरू मिलेर बनेको छ। त्यसैले मठ क्यास्टिलियन थिएन र होईन।
ऐतिहासिक र कलात्मक अशुद्धताको अतिरिक्त (यद्यपि मैले तिनीहरूलाई औंल्याएको छैन), यो बिर्सनु गाह्रो छ कि बीटस अफ क्लाइम्बिंग (वास्तविक मणि) उल्लेख गरिएको छैन, आज मोर्गन लाइब्रेरी र न्यु योर्कको संग्रहालयमा।
सान मिगुएल डे एस्क्लादा मेरो शहर हो र यो लियोनमा छ! क्यास्टिलामा होइन! के तपाईंलाई सुधार गर्ने र यस्तो बकवास लेख्ने पक्षमा छैन।
Valdabasta लाई जवाफ दिनुहोस्